Ny fitaovana fiarovana tsara indrindra 18 Shield Structure Manufacturer and Factory | Leihao
Ny sakana fiarovana amin'ny tselatra miaraka amin'ny famoahana farany ambony indrindra amin'ny 80KA dia mety amin'ny fiarovana ny tselatra ny famatsiana herinaratra lehibe amin'ny toerana manan-danja. Ity vokatra ity dia ampiasaina betsaka amin'ny rafi-pahefana toy ny tobin'ny serasera finday, birao / tobim-pifandraisana mikraoba, efitrano fitaovan'ny fifandraisan-davitra, orinasa indostrialy sy toeram-pitrandrahana, fiaramanidina sivily, fitantanam-bola, fiarovana, sns. , kabinetra fitsinjarana herinaratra, Fizarana herinaratra AC sy DC, vata fametahana, ary fitaovana manan-danja hafa izay mora voan'ny tselatra.
Surge protector (SPD) dia fitaovana tena ilaina amin'ny fiarovana ny tselatra amin'ny fitaovana elektronika. Ny fitsipiky ny fiasan'izy ireo dia ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, ny SPD dia ao anatin'ny toetry ny fanoherana avo be, ka miantoka ny fiasan'ny rafitra famatsiana herinaratra. Rehefa mihamitombo tsikelikely ny rafitra famatsiana herinaratra miaraka amin'ny onjam-peo sy ny voltase, ny fanoherana ny SPD dia mitohy mihena, ary ny SPD dia mihodina avy hatrany amin'ny fotoana nanosecond, ary ny angovo fisondrotana dia alefa amin'ny tany amin'ny alàlan'ny SPD; Aorian'ny firongatry ny fisondrotana dia miverina haingana amin'ny fanjakana impedance avo lenta ny mpiaro ny fihoaram-pefy, ka tsy misy fiantraikany amin'ny famatsiana herinaratra mahazatra ny rafitra.
Miaraka amin'ny 35mm standard DIN-rail mounting, mampifandray ny conducteur stranded varahina dia 2.5 ~ 35 mm².
Eo anoloan'ny LHSPD ny tsato-kazo tsirairay dia tsy maintsy napetraka fiarovana ---fampiasana fuse na miniature circuit breaker tselatra amin'izao fotoana izao fiarovana LHSPD, taorian'ny LHSPD fandravana ho fohy circuit fiarovana.
Apetaho amin'ny tsipika voaaro (fitaovana) ny LHSPD eo anoloana ary mifandray amin'ny tsipika famatsiana.
Ny vokatra kilasy iray napetraka ao amin'ny tsipika fidirana an-trano dia mitazona boaty fanapariahana amin'izao fotoana izao.
Ny vokatra kilasy B\_C dia apetraka amin'ny boaty fizarana gorodona.
D-kilasy vokatra akaikin'ny anoloana - farany fitaovana izay kely kokoa ny firongatry ny ankehitriny, kely sisa tavela
Fomba fandoavam-bola：Fandoavana alohan'ny fanaterana Fahafahana famatsiana: 500pc/andro
Ora nanomezana： mandefa ny entana ao anatin'ny 10 andro aorian'ny fandoavam-bola mialoha Serivisy aorian'ny varotra: Alefaso any amin'ny toerana voatondro
Fotoana ho an'ny logistika: noho ny halavirana Famaritana fenitra: LH-40
Santionany: manome anao santionany izahay
Nominal discharge ankehitriny Ao amin'ny 20KA
Imax 40KA ny fivoahana farany ambony indrindra
Ny haavon'ny fiarovana amin'ny voly Up ≤ 1.8KV
Fisehoana: arc feno, mena, fanontana pad
Fisehoana: fisaka, fotsy, fanontana pad
Volavolan'ny fandidiana mitohy farany ambony Uc 385V 255V~
Nominal famoahana ankehitriny Ao amin'ny 20KA 20KA
Ny fivoahana ambony indrindra amin'izao fotoana izao Imax 40KA 40KA
Voltage fiarovana haavon'ny Up ≤ 1.8KV ≤ 1.3KV
Fisehoana: arc feno, fotsy, fanontana pad
Modely: LH-40/385-4 LH Varatra pick surge mpiaro
40 Famoahana farany ambony indrindra: 40, 60
385 Volavolan'ny asa mitohy farany ambony: 385, 440V~
MODELY LH-10 LH-20 LH-40 LH-60 LH-80 NPE
Anarana fivoahana ankehitriny In (8/20) 5 10 20 30 40
Imax (8/20) farany indrindra 10 20 40 60 80
Nitombo ny fiarovana ≤1.0/1.2/1.4KV ≤1.2/1.4/1.5KV ≤1.5/1.6/1.8/2.0KV ≤1.6/1.8/2.1/2.2KV ≤1.6/1.8/2.1/2.3KV ≤1.3/1.4/1.6/1.8KV
Fisehoana azo atao Plane, arc feno, arc, misy bara fotsy, tsy misy bara fotsy 18 ny sakany, 27 ny sakany, 36 ny sakany (tsy voatery, azo amboarina)
Afaka manampy famantarana lavitra sy fantsona fivoahana
Fampiasana sy toetra mampiavaka ny fampisehoana
1. Faritra LPZOA Ny zavatra rehetra ao amin'ny faritra miharihary, ivelan'ny tranobe sy ity faritra ity dia mety ho tratran'ny tselatra mivantana ary mitarika ny tselatra rehetra, ary ny sahan'ny elektromagnetika tselatra ao amin'io faritra io dia tsy mihena.
2. Faritra LPZOB Ny zavatra rehetra amin'ity faritra ity dia tsy azo tohan'ny tselatra mivantana, fa ny haben'ny tselatra electromagnetika amin'ity faritra ity dia mitovy amin'ny any amin'ny faritra LPZOA.
3. Faritra LPZ1 Ny zavatra rehetra ao amin'io faritra io dia tsy mety ho tratran'ny tselatra mivantana, ary ny courant mikoriana amin'ny conducteur tsirairay dia kely kokoa noho ny ao amin'ny faritra LPZOB, ka mety hihena ny elektrômagnetika tselatra ao amin'io faritra io, arakaraka ny fepetra fiarovana.
4. Ny faritra fiarovana ny tselatra manaraka (LPZ2, sns.) Rehefa mila ahena bebe kokoa ny sahan'ny tselatra sy ny elektrômagnetika, dia tokony hampidirina ny faritra fiarovana ny tselatra manaraka, ary ny fepetra takiana amin'ny faritra fiarovana ny tselatra manaraka dia tokony hofantenana araka ny tontolo iainana takian'ny rafitra harovana. Ny tariby herinaratra rehetra sy ny tsipika famantarana dia miditra amin'ny toerana voaaro LPZ1 avy amin'ny toerana iray ihany, ary mifandray amin'ny fehikibo fatorana mitovy amin'ny 1 ao amin'ny LPZOA sy LPZ1 (amin'ny ankapobeny ao amin'ny efitrano fidirana). Ireo tsipika ireo dia mifamatotra amin'ny fehikibo fatorana mitovy amin'ny 2 amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny LPZ1 sy LPZ2. Ampifandraiso amin'ny fehikibo fatorana mitovy 1 ny ampinga 1 ivelan'ny trano ary ny fehikibo fatorana mitovy 2 ao anatiny amin'ny fehikibo fatorana mitovy 2. Ny LPZ2 namboarina tamin'izany fomba izany dia tsy ahafahan'ny tselatra ampidirina ao amin'io habaka io sy mandalo io habaka io.
Toerana ampiasaina: Azo ampiasaina amin'ny boaty fizarana kabinetra fizarana herinaratra ary.
Material sy ny dingana famokarana: Akorandriaka plastika, puce, varahina, ary kojakoja hafa. Akorandriaka plastika, chip, varahina, ary kojakoja hafa.Spot welding, famenoana lakaoly, fametahana, fanontana ary fametrahana module.
Raha ampitahaina amin'ny mpiara-mianatra amintsika, ny toetra mampiavaka ny vokatra dia: Ny fanaraha-maso ny vokatra dia mahafeno ny fenitra nasionaly.
teo aloha: Surge Protector Device 18OBO Structure
Manaraka: Surge Protector Device 27OBO Structure
Fanaraha-maso fanaraha-maso lavitra: miaraka amin'ny fanamafisana
LH-40/385/2P 2 p 36x90x66(mm)
LH-40/385/4P 4 p 72x90x66(mm)
●Aorian'ny fametrahana, (tsy maintsy ampidirina amin'ny toerany ny maody fiarovana tselatra 18mm) jereo raha miasa tsara ny maody fiarovana amin'ny tselatra 10350gs, karazana fantsona fivoahana, miaraka amin'ny varavarankely: Mandritra ny fampiasana dia tokony hojerena sy hojerena tsy tapaka ny varavarankelin'ny fampisehoana. Rehefa mena ny varavarankelin'ny fanehoam-pahadisoana (na ny terminal famantarana lavitra an'ny vokatra miaraka amin'ny famantarana fanairana fanairana famantarana lavitra), dia midika izany fa ny maody fiarovana amin'ny tselatra Raha sendra tsy fahombiazana, dia tokony hamboarina na hosoloina ara-potoana.
●Parallèle fahefana famatsiana tselatra Modules fiarovana dia tokony hapetraka amin'ny parallèle (Kevin wiring azo ampiasaina ihany koa), ny sakan'ny tokana Chip dia 36mm, ary azo ampifandraisina amin'ny roa wiring. Amin'ny ankapobeny, mila mampifandray ny iray amin'ireo lahatsoratra wiring roa ianao. . Ny tariby mampifandray dia tokony ho mafy orina, azo itokisana, fohy, matevina ary mahitsy.